8 Jaamacadaha ugu jaban Nederlaan 2022
8 Jaamacadaha ugu jaban Nederlaan
Waxaa jira jaamacado badan oo waxbarasho hooseeya oo Yurub ah, halkan waxaan kaga wada hadalnay jaamacadaha ugu jaban ee Nederlaan si aad ugu noolaato riyadaada waxbarasho ee dibadda.
Nederlaan waa waddan ku yaal Yurub oo caan ku ah muuqaalkiisa quruxda badan, mishiinka dabaysha, iyo waddooyinka baaskiilka. Sida goob kasta oo kale oo dhulka ah, waxay leedahay dhismayaal taariikhi ah iyo astaamo soo jiidanaya dalxiisayaasha adduunka oo dhan. Luuqadeeda rasmiga ah waa Dutch waana mid ka mid ah wadamada ugu qanisan Yurub.
Waa wax iska caadi ah in jaamacadaha Yurub ay jaban yihiin, xitaa ardayda caalamiga ah, Nederlaanna lagama dhaafo. Tani waa mid ka mid ah sababaha keenay in arday badan ay u soo jiidato inay wax ka bartaan jaamacadaha Yurub iyo sidoo kale inay helaan waxbarasho heer caalami ah maadaama qaar badan oo ka mid ah dugsiyadan ay yihiin kuwa ugu wanaagsan adduunka.
Markaa farsamo ahaan, markaad wax ka barato mid ka mid ah jaamacadaha ugu jaban ee Nederlaan waxaad ku kasbanaysaa shahaado sharaf leh miisaaniyad hoose. Sababaha kale ee ku kexeeya ajaaniibta inay u yimaadaan shahaadada Nederlaan waa hababkeeda waxbarid ee hal-abuurka leh, shahaadooyin caalami ah oo la aqoonsan yahay, iyo barnaamijyo shahaado oo kala duwan oo Ingiriisi lagu dhigo.
Qaar ka mid ah jaamacadaha Nederlaan waa kuwa ugu sarreeya marka loo eego barnaamijyada sida sharciga caalamiga ah, injineernimada, xisaabta, caafimaadka, ganacsiga, iyo qaar kaloo badan. Kuwani waa darajooyin la fadhiya jaamacadaha kale sida MIT, Harvard, UC Berkeley, Yale, NYU, Stanford, iyo qaar kaloo badan.
1 Sida Loo Helo Jaamacado Raqiis Ah Nederlaan
2 Celceliska Kharashka Waxbarasho ee Nederlaan ee Ardayda Caalamiga ah
3 Shuruudaha Dalbashada Jaamacadaha Netherland
4 Jaamacadaha ugu jaban Nederlaan
4.1 1. Jaamacadda Amsterdam (UvA)
4.2 2. Jaamacadda Utrecht
4.3 3. Jaamacadda Groningen
4.4 4. Jaamacadda Twente
4.5 5. Jaamacadda Radboud
4.6 6. Jaamacadda Tignoolajiyada ee Delft (TU Delft)
4.7 7. Eindhoven Institute of Technology
4.8 8. Fontys University of Applied Sciences
Sida Loo Helo Jaamacado Raqiis Ah Nederlaan
Waxaa jira ilo badan oo internetka ah oo kaa caawin kara inaad hesho jaamacadaha ugu jaban ee Nederlaan oo boostada blog-ka ayaa ka mid ah. Waxaad sidoo kale tixraaci kartaa macallimiinta fasalkaaga iyo macallimiinta ku saabsan rabitaankaaga inaad wax ku barato Nederland iyo sida aad u heli karto mid jaban.
Celceliska Kharashka Waxbarasho ee Nederlaan ee Ardayda Caalamiga ah
Kharashka waxbaridda ee Nederlaan ee ardayda caalamiga ahi way ku kala duwan tahay jaamacad, barnaamij, iyo heerka waxbarasho. Si kastaba ha ahaatee, waxaan awoodnay inaan bixinno celceliska kharashka waxbarashada iyadoo lagu saleynayo barnaamijyada shahaadada kala duwan.
Celceliska kharashka waxbarashada ee Netherland ee ardayda caalamiga ah ee barnaamijyada shahaadada koowaad ee jaamacadda waxay u dhexeysaa € 8,000 iyo £ 20,000 sannadkii iyadoo ku xiran barnaamijka.
Celceliska kharashka waxbarashada ee Netherland ee ardayda caalamiga ah ee barnaamijyada masters-ka waxay u dhaxaysaa € 10,000 iyo £ 19,000 sannadkii iyadoo ku xiran barnaamijka.
Celceliska kharashka waxbarashada ee Netherland ee ardayda caalamiga ah ee Ph.D. Barnaamijku badanaa waa £0 sababtoo ah waxaad la shaqayn doontaa macalimiin waxaana lagu siin doonaa lacag bille ah.
Shuruudaha Dalbashada Jaamacadaha Netherland
Kuwa soo socda waa shuruudaha ay jaamacadaha Netherland codsan karaan:
Ardayda codsanaysa barnaamijka Ingiriisiga lagu barto ee aan ku hadlin Ingiriisi hooyo waa inay qaataan mid ka mid ah imtixaanada aqoonta luqadda Ingiriisiga ee la aqoonsan yahay oo ay ku aflaxaan wadarta guud.
Codsadayaashu waa inay haystaan ​​fiisaha ardayga ama ogolaanshaha waxbarasho
Dhammaan qoraalada akadeemiyadeed ee dugsiyadii hore ee ay dhigan jireen inta badan waa loo baahan yahay
Dukumeentiyada sida aqoonsiga, waraaqaha talada, CV, qoraal shakhsiyeed, iwm. waa inay ku jiraan gacantaada.
Dugsigu wuxuu bixin karaa imtixaan gudaha ah ama waraysi qiimayn dheeraad ah, codsadayaashu waa inay maskaxdooda u diyaariyaan taas.
Natiijo tacliineed oo heer sare ah iyo ka-qaybgal firfircoon ee bulshooyinkooda ayaa sii kordhin doona aqbalaaddaada.
Ogow in kuwani yihiin shuruudo caadi ah oo ay jiri karaan wax ka badan ama ka yar. Si taas loo gaaro, inta aan ka wada hadlayno jaamacadaha ugu jaban ee Nederlaan ee hoose, waxaan ku siinnay isku xirka jaamacadaha mid kasta oo ka mid ah si aad wax uga ogaato shuruudaha barnaamijka gaarka ah.
Jaamacadaha ugu jaban Nederlaan
Halkan, waxaan ku taxnay jaamacadaha ugu jaban ee Nederlaan waxaanan si buuxda uga hadalnay mid kasta oo iyaga ka mid ah hoos. Isku xirka shabakadaha mid kasta oo ka mid ah dugsiyada ayaa sidoo kale la siiyay si ay kuugu suurtagasho inaad si fudud u booqato dugsiga aad xiisaynayso si aad wax badan uga ogaato waxyaabaha kale sida nidaamka codsiga, kama dambaysta codsiga, fursadaha gargaarka maaliyadeed, iyo wax ka badan.
1. Jaamacadda Amsterdam (UvA)
Jaamacadda Amsterdam waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn Nederlaan oo la aasaasay 1632 waxayna wali bixisaa barnaamijyo heer caalami ah oo cusub. Waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo ku taal Amsterdam, Netherlands, oo bixisa barnaamijyo shahaado cilmi-baaris oo ballaaran oo dhinacyo kala duwan leh.
Bachelor, master's, iyo barnaamijyada doctorate-ka waxaa lagu bixiyaa todobadeeda kulliyadood ee aadanaha, cilmiga bulshada iyo dhaqanka, dhaqaalaha & ganacsiga, sayniska, sharciga, caafimaadka, iyo dhakhtarka ilkaha. In ka badan 220 barnaamij ayaa lagu dhigaa luqadda Ingiriisiga. UvA waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu jaban Nederlaan oo leh khidmadaha waxbaridda laga bilaabo £2,100 sanadkii ardayda EU/EEA iyo £8,100 sanadkii ardayda aan EU/EEA ahayn.
Maadaama ay tahay jaamacad dowladeed, waxaa maalgeliya dowladda, sidaas darteedna ay ogolaato ardayda ka soo jeeda dhaqamada kala duwan ee ka soo baxa. Shuruudaha gelitaanka ma aha mid aad u adag, sidoo kale heerka aqbalaadda ma yara sababtoo ah, ilaa hadda, jaamacadda ugu weyn ee Nederlaan marka la diiwaan geliyo. Si aad ula xiriirto xafiiska oggolaanshaha oo aad u badan tahay inaad hesho deeq waxbarasho oo taageeri karta waxbarashadaada UvA, raac xiriirka hoose ee lagu bixiyay.
2. Jaamacadda Utrecht
Jaamacadda Utrecht waxay ku taal Gobolka Utrecht, Netherlands, waana mid ka mid ah jaamacadaha ugu jaban Nederlaan. Iyada oo ay ugu wacan tahay tacliinteeda sharafta leh iyo cilmi-baarista diiradda saareysa ardayda ka socota Yurub iyo qaybaha kale ee qaarada ayaa halkan u soo qulqula sanad walba si ay u sii wataan bachelor's, master's, ama doctorate. Marka laga reebo kuwan, Utrecht waxay sidoo kale bixisaa barnaamijyo kale oo waxbarasho sida waxbarasho xirfadeed, waxbarasho loogu talagalay qaxootiga, dugsiga xagaaga ee Utrecht, barnaamijyada sharafta iyo isdhaafsiga, waxbarashada internetka, iyo waxbarasho kale oo tababar ah.
Jaamacaddu waxay u qaybsantaa 7 kulliyadood oo kala ah cilmiga aadanaha, cilmiga bulshada, sharciga & dhaqaalaha, caafimaadka, cilmiga dhulka, caafimaadka xoolaha, iyo cilmiga dabiiciga ah. In ka badan 100 barnaamij ayaa lagu dhigaa Ingiriisi taas oo faa'iido u ah ardayda caalamiga ah ee xiisaynaysa inay halkan wax ku bartaan sidoo kalena aan qaali ahayn.
Kharashka waxbarashada ee ardayda shahaadada koowaad leh iyo kuwa qalin jebiyay waxay ka bilaabataa £ 2,200 sanadkii ardayda EU iyo £ 10,000 sanadkii ardayda caalamiga ah. Ph.D ardayda waxaa u shaqeeya dugsiga, sidaas darteed, ma bixiyaan kharashka laakiin waxay helaan gunnooyin bille ama toddobaadle ah dugsiga.
Booqo shabakada dugsiga.
3. Jaamacadda Groningen
Soo jiidashada ardayda leh waxbarashadooda hoose, Jaamacadda Groningen waa mid kale oo ka mid ah jaamacadaha ugu jaban ee Nederlaan. Waxay ku taal magaalada firfircoon ee Groningen taas oo inta badan ay la qarxaan arday ka timid meelo kala duwan. Jaamacadda waxaa iskaashi la leh hay'ado iyo jaamacado caalami ah oo badan oo adduunka ah, sidaas darteed taageere weyn u ah waxbarashada caalamiga ah.
Jaamacadda Groningen waxay si sharaf leh u soo bandhigtay jaamacadaha ugu fiican Yurub iyo adduunkaba. Ka qayb galka Groningen waa fursad lagu helo waxbarasho heer caalami ah oo lagu kasbado shahaado heer sare ah oo ay aqoonsan yihiin ururada aduunka oo dhan.
Kharashka waxbarashadu wuxuu ka bilaabmaa £2,100 ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo masters-ka ee Nederland iyo EU/EEA gobolka. Kharashka waxbaridda ee ardayda caalamiga ah ee ku jira barnaamijyada shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo Master's waxay ka bilaabataa £ 9,000 iyo £ 13,500 siday u kala horreeyaan.
4. Jaamacadda Twente
Waxaa la aasaasay 1961 oo ah jaamacad cilmi baaris dadweyne oo ku taal magaalada Enschede, Netherlands, Jaamacadda Twente waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu jaban ee Nederlaan. In kasta oo dhawaan la aasaasay, jaamacaddu waxay u baxday inay noqoto machad caalami ah oo la aqoonsan yahay oo ah machad sare oo bixiya heer caalami, waxbarasho hal abuur leh oo barnaamijyo tacliineed oo ballaaran ah.
Barnaamijyadani waxay u horseedaan bachelor, master's, iyo shahaadooyin doctorate iyo sidoo kale shahaado kale iyo barnaamijyo xirfadeed. Marka laga reebo bixinta tacliineed ee tayada leh ee ardayda halkan ku kaxaysa, kharashka dugsigu waa raqiis, shahaadooyinka la bixiyaana waa mid caalami ah oo la aqoonsan yahay.
Kharashka waxbaridda ee ardayda shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo masters-ka ee gobollada EU/EEA waxay ka bilaabataa £2,100 sannadkii. Kharashka waxbarashada ee ardayda wadamada kale waxay ka bilaabataa £ 9,000 sanadkii barnaamijka shahaadada iyo £ 12,500 sanadkii barnaamijka masters-ka. Jaamacadda Twente waxay bixisaa deeqo waxbarasho iyo doorashooyin kale oo kaalmo maaliyadeed oo ardaydu ay codsan karaan.
5. Jaamacadda Radboud
Liiskayaga shanaad ee jaamacadaha ugu jaban Nederlaan waxa ku jira Jaamacadda Radboud, oo ah jaamacad cilmi-baaris dadweyne oo ku taal Nijmegen, Netherlands. Waxaa la aasaasay 1923 ilaa iyo markaas waxay bixinaysay barnaamijyo hal abuur leh dhammaan qaybaha tacliinta. Jaamacaddu waxay leedahay kulliyadaha 7 kuwaas oo ah sayniska, farshaxanka, sharciga, cilmiga bulshada, Xarunta Caafimaadka ee Jaamacadda Radboud, Dugsiga Maareynta ee Nijmegen, iyo Kuliyadda Falsafadda, Fiqiga, iyo Daraasaadka Diinta.
Barnaamijyo kala duwan ayaa lagu bixiyaa bachelor, master's, Ph.D., pre-masters, iyo barnaamijyada da'da yar. Qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadan waxaa lagu bixiyaa Ingiriis si loo soo jiito ardayda caalamiga ah. Barnaamijyadu waa kuwo cilmi baaris ah oo loogu talagalay in lagu qalabeeyo ardayda xirfado si ay u gutaan jidadkooda shaqo.
Kharashka waxbarashada ee barnaamijyada shahaadada koowaad waa £ 2,143 sanadkii ardayda EU iyo £ 8,342 sanadkii arday caalami ah ama mid aan EU ahayn. Ardayda EU-da ee barnaamijka Master-ka waxaa lagu soo dalacayaa kharashka waxbarashada oo ah £2,143 sannadkii, ardayda caalamiga ah ama kuwa aan EU-da ahayn waxay bixiyaan kharashka waxbarashada sannadkii oo ah £9,124.
6. Jaamacadda Tignoolajiyada ee Delft (TU Delft)
TU Delft waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu jaban Nederlaan iyo jaamacadda farsamada dadweynaha ugu da'da weyn uguna weyn Nederlaan. Sidoo kale waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan Nederlaan, mid ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya injineernimada iyo tignoolajiyada adduunka, iyo mid ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan ee ka qalin jabiyay adduunka.
Marka laga reebo waxbarashada jaban, heerkeeda tacliinta waxay sidoo kale soo jiidataa ardayda qayb kasta oo adduunka ah. Machadku waxa uu leeyahay siddeed kulliyadood oo inta badan diiradda lagu saaro waxbarashada injineernimada iyo farsamada. Barnaamijyada shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo mastarka waxaa lagu bixiyaa luqadda Ingiriisiga si loo daboolo baahiyaha waxbarasho ee ardayda caalamiga ah.
Kharashka waxbaridda ee ardayda shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo masters-ka ee gobollada EU/EEA waa £2,100 sannadkii. Kharashka waxbaridda ee ardayda caalamiga ah ee ku jira barnaamijyada shahaadada koowaad iyo kan mastarka waa £ 14,500 sanadkii iyo £ 18,750 sanadkii siday u kala horreeyaan.
7. Eindhoven Institute of Technology
Eindhoven Institute of Technology, oo caan ku ah TU Eindhoven ama TU/e, waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu jaban ee Nederlaan. Waa machad sare oo xagga farsamada dadweynaha ah oo ku yaal magaalada firfircoon ee Eindhoven, Nederlaan. Barnaamijyo heer sare ah oo tignoolajiyada diiradda lagu saaray ayaa laga bixiyaa TU/e ​​taasoo u horseedda BSc, MSc, Ph.D., iyo shahaadooyin PDEng.
Qiimaynta guud ee caalamiga ah, jaamacaddu waxay ku jirtaa 100kath booska iyo ka sii fog laakiin waxa uu ku sarreeyaa barnaamijyada sayniska iyo injineernimada caalamiga ah. Jaamacaddu waxay iskaashi la leedahay machadyo kale oo ka baxsan Yurub si loo xoojiyo waxbarashada caalamiga ah. Haddii aad raadinayso machad diiradda saaraya waxbarista tignoolajiyada, TU/e ​​waa inay ka mid noqotaa xulashooyinkaaga.
Kharashka waxbarashadu wuxuu ka bilaabmaa £10,000 ardayda caalamiga ah.
8. Fontys University of Applied Sciences
Fontys University of Applied Sciences waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu jaban Nederlaan oo leh saddex xarumood oo ku yaal magaalooyinka Eindhoven, Tilburg, iyo Venlo. In ka badan 200 oo barnaamijyo bachelor ah iyo Master's ayaa lagu bixiyaa dhinacyo badan oo tacliineed sida injineernimada, tignoolajiyada macluumaadka, jimicsiga jimicsiga, iyo akadeemiyadda qoob ka ciyaarka kuwaas oo intooda badan lagu bixiyo luqadaha Ingiriisiga iyo Jarmalka.
Waxa kale oo jira barnaamijyo gaagaaban sida barnaamijyada isdhaafsiga iyo dugsiga xagaaga. Dugsiga waxaa loo arkaa mid ka mid ah meelaha xiisaha leh ee lagu barto qof kasta oo xiisaynaya tignoolajiyada, hal-abuurka, iyo hal-abuurka. Albaabadaheeda waxay u furan yihiin ardayda ka socota dhammaan qaybaha adduunka.
Marka laga reebo bixinta tacliineed ee tayada leh, kharashka waxbarashada hoose ayaa sidoo kale soo jiidata ardayda ka kala yimid afarta gees ee dhulka. Kharashka waxbaridda ee ardayda EU-da waxay ka bilaabataa £2,100 iyo £7,920 ardayda caalamiga ah.
Tani waxay soo afjaraysaa 8-da jaamacadood ee ugu jaban Nederlaan. Waad ogtahay, waxaan daabacnay maqaallo kale oo ku saabsan jaamacadaha Yurub waxayna dhamaantood leeyihiin hal shay - waxay ka mid yihiin kuwa ugu fiican adduunka oo aad u jaban.
Haddii aad rabto in aad hesho waxbarasho tayo leh oo dibadda ah qiimo jaban, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso jaamacadaha Yurub. Waxay bixiyaan shahaadooyin caalami ah oo la aqoonsan yahay oo waxaad si fudud u heli kartaa deeq waxbarasho haddii aad buuxiso shuruudaha u-qalmitaanka.
Qaar badan oo ka mid ah jaamacadaha Yurub waa u bilaash muwaadiniinteeda iyo ardayda EU/EEA sidoo kale.
Ma qaali in Nederlaan wax lagu barto?
Nederlaan waxay noqon kartaa meel raqiis ah oo wax lagu barto haddii aad si sax ah u sameyso. Waxaad u baahan doontaa inaad codsato jaamacadaha dadweynaha ama dawladdu leedahay iyo sidoo kale isha deeqaha waxbarasho oo dabooli kara dhammaan ama kala badh kharashka waxbarashadaada. Qiimaha noloshu sidoo kale ma aha qaali.
Nederlaan ma jiraan jaamacado bilaash ah?
Ma jiraan jaamacado bilaash ah oo Nederlaan ah, waxaad wax ku baran kartaa oo keliya bilaash haddii aad hesho deeq waxbarasho oo buuxda si aad u daboosho dhammaan waxbarashadaada muddada waxbarashadaada. Si kastaba ha ahaatee, dawladdu waxay kabtay qiimaha kharashka waxbarashada taasoo ka dhigaysa meel la awoodi karo in wax lagu barto.
11 jaamacadood oo jaban oo ku yaal Faransiiska oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah
Jaamacadaha Aan Wax Khidmad Ah Ka Qaadan Yurub | Codso halkan
9 Jaamacadood oo Qaali ah oo ku Yaal Qaarada Yurub Oo Afka Ingiriisiga wax ku barta
Jaamacadaha ugu sareeya ee aqbalaya IELTS Dhibcaha 6 ee Yurub
15 Jaamacadaha ugu Qaalisan Yurub ee Ardayda Caalamiga ah
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Masters ee Yurub
Barashada Hagaha Dibadda Deeqaha Yurub Dugsiyada Waxbarshada Bilaashka ah Jaamacadaha Waxbarashada Yar
Previous Post:13ka Jaamacadood ee ugu Fiican Sharciga Caalamiga ah
Post Next:11 Iskuullada Animation ee ugu Fiican Japan